အမေရိကန်-တာလီဘန်ငြိမ်းချမ်းရေးလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ၌ မွှေနှောက်လျှက်ရှိသည့် ခေတ်ပေါ်ပြောက်ကြားစစ်နည်းဗျူဟာကို အင်အားကြီးနိုင်ငံတို့ လက်မှိုင်ချပြီ – H2Oupdatenews
အမေရိကန်-တာလီဘန်ငြိမ်းချမ်းရေးလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းနှင့် နိုင်ငံတကာ၌ မွှေနှောက်လျှက်ရှိသည့် ခေတ်ပေါ်ပြောက်ကြားစစ်နည်းဗျူဟာကို အင်အားကြီးနိုင်ငံတို့ လက်မှိုင်ချပြီ
oungmarine11@outlook.com 02/03/2020	No Comments
ဖေဖော်ဝါရီ – ၂၉-ရက်နေ့ ကာတာနိုင်ငံ ဒိုဟာမြို့၌ အာဖဂန်တာလီဘန်နှင့် အမေရိကန်တို့က ငြိမ်းချမ်းရေး သဘောတူညီချက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သည်။ အာဖဂန်နစ္စတန်မြေပေါ်တွင် တာလီဘန်နှင့် အမေရိကန်ဦးဆောင်နေတိုးတပ်ဖွဲ့များ ၁၈ နှစ်ကြာ စစ်ခင်းနေခြင်းမှ အဆုံးသတ်ရန်ဖြစ်ပေါ်လာရာတွင် ကာယကံရှင် နိုင်ငံများအပြင်၊ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံအသီးသီး- အဖွဲ့အစည်းအသီးသီးတို့၌ ရည်မှန်းချက်နှင့် အမြင်အမျိုးမျိုးရှိနေသည်ဟု Al Jazeera က ယမန်နေ့ရေးသားသည်။
လက်ရှိအာဖဂန်အစိုးရကို တာလီဘန်တို့က လက်မခံပါ။ အာဖဂန်အစိုးရကလည်း ၎င်းတို့ဖမ်းဆီးထားသော တာလီဘန်အကျဉ်းသားများကို ပြန်လွှတ်ပေးရေး၌ အမေရိကန်က အခွင့်အာဏာမရှိပဲ ငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်တွင် ထည့်သွင်းခြင်းမှာတရားမဝင်ဟု ယမ်းပုံမီးကျဖြစ်နေသည်။
အဆိုပါစာချုပ်တွင် တစ်ဖက်နှင့်တစ်ဖက် အသိအမှတ်မပြုကြသော အာဖဂန်လက်ရှိအစိုးရနှင့် တာလီဘန်တို့အပါအဝင် အာဖဂန်နစ္စတန်ပဋိပက္ခ၌ ပတ်သက်နေသော အဖွဲ့အစည်းအားလုံးတို့အနေဖြင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲ၍ အာဏာခွဲဝေရေး တိုက်ရိုက်ဆွေးနွေးပွဲများကို မေ- ၁၀ ခန့်တွင် စတင်ရန်။ ၁၄-လအတွင်း အမေရိကန်နှင့် နေတိုးတပ်များ ရုတ်သိမ်းရန်တို့ပါဝင်သည်။
အာဖဂန်ပြည်သူအများစုတို့ကမူ ၎င်းတို့မြေပေါ်တွင် နိုင်ငံခြားစစ်တပ်များ မရှိခြင်းက ပိုကောင်းသည်ဟု မှတ်ယူသော်လည်း ဘာသာရေးသဘောထားတင်းမာ၍ နှိပ်စက်သတ်ဖြတ်ရာတွင် လက်ယဉ်သော တာလီဘန်တို့ ပြန်လာမည်ကို စိုးရွံ့လျှက်ရှိသည်။
အာဖဂန်သည် ကုန်းတွင်းပိတ်နိုင်ငံဖြစ်လင့်ကစား အာရှ-ဥရောပဆက်သွယ်ရာ ပိုးလမ်းမကြီးပေါ်၌တည်ရှိခြင်း၊ အင်အားကြီး တရုတ်၏ ဝင်ပေါက်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့် ပထဝီနိုင်ငံရေးအရ အရေးပါသည်။ အတိတ်သမိုင်းတွင် ဂရိ-မွန်ဂိုနှင့်အာရပ်စစ်ဘုရင်တို့၏ သိမ်းပိုက်ခံရဖူးပြီး ရုရှားအင်ပါယာနှင့် ဗြိတိသျှအိန္ဒိယတို့ အားပြိုင်ရာ စစ်တလင်း ဖြစ်ခဲ့သည်။ ယခုနောက်ပိုင်း နိုင်ငံစုံကိုယ်စားပြုတို့၏ ဗြောင်ကျကျသော်၎င်း- ပုန်းလျှိုးကွယ်လျှိုးသော်၎င်း စစ်ခင်းရာအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားသည်။
ဆိုဗီယက်ကျူးကျော်မှု့အာဖဂန်စစ်ပွဲသည် အာဖဂန်ကို အစိတ်စိတ်အမွှာမွှာကွဲပြား၍ နိုင်ငံအတွင်း အိုးအိမ်ထူထောင်နေထိုင်သူအချင်းချင်း သွေးချောင်းစီးသတ်ဖြတ်မှုများ စတင်စေခဲ့သည်။ ၁၉၇၉-တွင် ဆိုဗီယက်တပ်များ အာဖဂန်သို့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီး PDPA လက်ဝဲအစိုးရကို ကျောထောက်နောက်ခံပေးသည်။
ပထဝီနိုင်ငံရေးတွင် အရေးပါသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံ၌ ဆိုဗီယက်လွှမ်းမိုးမှုအောက် လုံးလုံကျရောက်သွားခြင်းမှာ အနောက်အုပ်စုအတွက် လက်ခံနိုင်ဖွယ်မရှိပါ။ ၎င်းတို့သာမက ထိုစဉ်က ဆိုဗီယက်တို့နှင့် ဖီလာဆန့်ကျင်ဖြစ်နေသာ တရုတ် လည်း သဘောမတူနိုင်ချေ။
အပြင်းထန်ဆုံးသော “ စစ်အေးတိုက်ပွဲကြီး “ မှ “ စစ်ပူတိုက်ပွဲကြီး “ မဖြစ်ရလေအောင် အနောက်အုပ်စုအ တွက် ကိုယ်စားပြုစစ်ခင်းပေးသူများမှာ “ အာဖဂန်မူဂျာဟေဒင်” များဖြစ်သည်။ အာဖဂန်အား ကွန်မြူနစ်လက်တွင်း မှ ကယ်တင်ရေး “ မြင့်မြတ်သော ဂျီဟဒ်စစ်ပွဲ “ ဆင်နွှဲရန် နိုင်ငံတကာမှ “ အစ္စလာမ်ဘာသာရေးစစ်သည်တော်” များကို အမေရိကန် စီအိုင်အေက စုစည်းပေးသည်။
Maktab al-Khidamat အာဖဂန်ဝန်ဆောင်မှုဗျူရို ( MAK ) ကို ဘရွတ်ကလင်း၊ ဆီယက်တဲလ်၊ လော့စ်အိန်ဂျလိစ်အပါအဝင် အမေရိကန်မြို့ကြီး ၃၃- မြို့ရှိဗလီများတွင် အလှူ ငွေလက်ခံရာဋ္ဌာနချုပ်များ၌ ဖွင့်လှစ်သည်။ ဤသို့ဖြင့် အယ်လ်ကိုင်ဒါအဖွဲ့ကြီးနှင့်အတူ အိုစမာဘင်လာ ဒင်ထင်ရှားလာသည်။
အာဖဂန်နှင့်ရေဝေကုန်းတန်းဝင်ပေါက် ၄၇ -မိုင်မျှ ထိစပ်နေသော တရုတ်နိုင်ငံကလည်း ရှင်းကျန်ပြည်နယ်မှ ဝီဂါ မွတ်စလင်လူငယ်တို့ အာဖဂန်သို့ သွားရောက်နိုင်ရန်စီစဉ်ပေးသည်။ ဥက္ကကြီးမော်၏ ပြောက်ကြားစစ်နည်းဗျူဟာကို အာဖဂန်မူဂျာဟေဒင်များအား သင်ကြားပေးသည့် လက်ဦးဆရာမှာ တရုတ်ဖြစ်သည်။ ( ကိုးကား Foreign Policy., N0v. 1, 2018. For Them, Afghanistan Is Safer Than China )
တိုတိုပြောရလျှင် အာဖဂန်မှ ဆိုဗီယက်တပ်များသည် ၉-နှစ်မျှသာခံပြီး ၁၉၈၉-ခုနှစ်တွင် အပြီးတိုင်ရုတ်သိမ်း သွားရသည်။ ထိုနောက်ပိုင်း အာဖဂန်ကို နိုင်ငံတကာက စိတ်မဝင်စားတော့ပါ။ လိုဘပြည့်ပြီဖြစ်၍ဖုတ်ဖက်ခါ ထွက်သွားကြသည်။ ကျန်ရစ်ခဲ့သော အာဖဂန်သည် လက်နက်ဖောချင်းသောချင်းဖြစ်လျှက် စစ်ဘုရင်များမင်းမူ ကာ ၁၉၉၆-ခုနှစ်တွင်တာလီဘန်တို့က မြို့တော် ကဘူးကို အယ်လ်ကိုင်ဒါတို့ အကူအညီဖြင့်သိမ်းပိုက်သည်။
ဆိုဗီယက်ဆုတ်ခွာသွားပြီး ၁၉၉၀ ဝန်းကျင်မှစကာ အယ်လ်ကိုင်ဒါနှင့် ဆော်ဒီ-အမေရိကန်အုပ်စု အစေးမကပ်တော့ပါ။ ကမ္ဘာ့စစ်အင်အားကြီး ရုရှားကို အောင်နိုင်သော အယ်လ်ကိုင်ဒါသည် သွေးနားထင်ရောက်တော့သည်။ ( ၁ ) ရုရှားကို အလဲထိုးနိုင်သော စစ်နည်းဗျူဟာကို ငါတို့ ကျွမ်းကျင်သည်။ ( ၂ ) အမေရိကန်ကိုလည်း သင်ခန်းစာပေးရမည်။ ( ၃ ) ဆိုဗီယက်အင်ပါယာပြိုကွဲသွားရခြင်းမှာ ငါတို့အပေါ် အနိုင်ကျင့်၍ အရှင်မြတ်၏ ဒါဏ်ခတ်ခံရခြင်းဖြစ်သည်။ ငါတို့အတွက် အချိန်အခါကျလေပြီ.. ဟူ၏။
ဥက္ကဋ္ဌကြီးမော်၏ ပြောက်ကြားစစ်နည်းဗျူဟာကို ပြောင်းပြန်လှန်သည်။ ကျေးရွာအစား မြို့ကြီးများကို အခြေပြု သည်။ အထိအရှမခံနိုင်သော ဘာသာရေးဆိုင်ရာအဆောက်အအုံမျိုးတွင် တပ်စွဲသည်။ ကိုရမ်ကျမ်းတွင် မည်သည့်နေရာမှ ဖော်ပြခြင်းမရှိသော “ သေလျှင် အာဇာနည်ဖြစ်သည်“ ဟူသော အယူအဆကို ရိုက်သွင်းကာ အင်အားအလုံးအရင်းရန်သူကို စနိုက်ပါသုံး၍၎င်း၊ မြို့ခံအရပ်သားများနှင့် ရောနှောနေရာမှ ချောင်းမြောင်း တိုက်ခိုက် ခြင်းဖြင့်၎င်း ထင်ပေါ်ကျော်ကြား စိတ်ဝင်စားအောင် ဖန်တီးသည်။
ယခင် အာဖဂန်ဝန်ဆောင်မှုဗျူရို ( MAK ) မှ အမာခံမှ အယ်လ်ကိုင်ဒါဖြစ်လာသူများသည် အမေရိကန် ကမ္ဘာ့ကုန်သွယ်ရေး အဆောက်အအုံနှင့် အစိုးရဋ္ဌာနများ၊ နိုင်ငံတကာရှိအမေရိကန်သံရုံး-စစ်သင်္ဘောများကို ဗုံးထောင်သည်။ ၂၀၀၁-ခုနှစ် စက်တင်ဘာ ၁၁-ရက်နေ့ အကြမ်းဖက်ခြင်းဖြင့် လူ ၃,၀၀၀ ကျော်သေဆုံးရသည့် သမိုင်းဝင် ( 9/11 ) ဖြစ်ပေါ်လာရသည်။
သမ္မတဂျော့ဒဗလျှူဘွတ်ရှ် ( သားဘွတ်ရှ် ) သည် ရှက်လည်းရှက် ဒေါသလည်းထွက်နှင့် “အကြမ်းဖက်သမား ဘက်ကနေမလား၊ ကျုပ်တို့ဘက်ကနေမလား “ နှစ်ခုအနက် ၁-ခုသာာရွေးစရာရှိသည် ” ဟု ကမ္ဘာအားခြိမ်းခြောက်သည်။ အိုစမာဘင်လာဒင်အား ပေးအပ်ခြင်းမရှိသော အာဖဂန် တာလီဘန်အစိုးရအား နေတိုးတပ်ဖွဲ့များ အကူအညီဖြင့် ကျူးကျော်ထိုးစစ်ဆင်တော့သည်။
9/11 အပြီး ၁၅ရက်အကြာ စက်တင်ဘာ ၂၆ တွင်စတင်စစ်ခင်းခဲ့ရာ ပထမရက်သတ္တပတ်အတွင်းမှာပင် ကဘူးရှိ တာလီဘန်နှင့် အယ်လ်ကိုင်ဒါထိပ်တန်းခေါင်းဆောင် အတော်များများ ကျဆုံးသည်။ နှစ်ပတ်အတွင်း တာလီဘန်အစိုးရ ပြုတ်ကျသွားသော်လည်း မူလာအိုမာနှင့် ကျန်တာလီဘန်ခေါင်းဆောင်များ၊ အိုစမာဘင်လာဒင်နှင့် ကျန်အယ်လ်ကိုင်ဒါခေါင်းဆောင်များ အိမ်နီးချင်း ပါကစ္စတန်ဘက်သို့ ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားသည်။
ထိုနောက်ပိုင်း အာဖဂန်တွင် လုံခြုံရေးအရ မဲပေးနိုင်သူများဆန္ဒမဲဖြင့် အစိုးရပေါ်ပေါက်လာသော်လည်း ၁၈-နှစ်ကျော် ကြာသည့်အထိ မငြိမ်းချမ်းနိုင်ခဲ့ပါ။ ထိုကာလအတောအတွင်း အမေရိကန်နှင့် နေတိုးတပ်ဖွဲ့ဝင် ၃,၀၀၀ ကျော်အပါအဝင် အာဖဂန်အစိုးရ စစ်ဖက်ဝန်ထမ်း စုစုပေါင်း ၇၀,၀၀၀ ခန့်၊ အရပ်သား ၃၉,၀၀၀ ခန့် ။ တာလီဘန်-အယ်လ်ကိုင်ဒါဘက်မှ ၈၀,၀၀၀ ကျော်ခန့် သေဆုံးခဲ့ရပြီးဖြစ်သည်။
အယ်လ်ကိုင်ဒါသည် မြေလျှိုးနေပြီး ခေတ်ပေါ် ပြောက်ကြားစစ်နည်းဗျူဟာကို အယ်လ်ကိုင်ဒါလူဟောင်း သူ့ထက်ဆိုးသော အိုင်အက်စ် ( IS, ယခင် ISIS ) တို့က အမွေဆက်ခံကာ အစ္စလာမ်မစ်နိုင်ငံတော် ထူထောင်ရန် အားထုတ်နေသည်။
ထိုသူတို့သည် တရားဥပဒေဘောင်၏ အပြင်ဘက်၌ရှိနေသည်။ ကြမ်းချင်တိုင်းကြမ်း ရမ်းချင်တိုင်းရမ်း၍ အပြစ်ပေးသူ မရှိပါ။ ဥပဒေအရဖွဲ့စည်းထားသည့် အမေရိကန်-သြစတေးလျတပ်မတော်တို့မှာ စစ်ခုံရုံးနှင့် ICC သို့ မျက်စပစ်နေလေသည်။ ဖိလစ်ပိုင်မှ မာရဝီလည်း မြို့ပျက်ကြီးဖြစ်ကာ လူ ၂-သိန်းလည်း ယနေ့တိုင် အိမ်မပြန်နိုင်သေး ။ လန့်ဖြန့်သွားပုံရသော တရုတ်ကြီးလည်း ဝီဂါတို့အား လိုရာ ပုံသွင်းရန်ကြိုးစားရာမှ လူ့အခွင့် အရေးအဖွဲ့အစည်းတို့အကြား ပေါ်ပျူလာဖြစ် စန်းပွင့်နေလေသည်။
((( Al Jazeera., 1 Mar 2020,” Taliban-US agreement: How the world reacted.” ကို #HtayOung, #OungMarine ဆီလျော်အောင် ကောက်နှုတ်ဘာသာပြန်ဆိုသည်။ ဆက်စပ်ကိုးကားအကြောင်းအရာများမှာ ပေးထားပါ Links များအတိုင်းဖြစ်သည်။ )))
#အမေရိကန်-တာလီဘန်ငြိမ်းချမ်းရေး #အာဖဂန်စစ်ပွဲ #ခေတ်ပေါ်ပြောက်ကြားစစ်နည်းဗျူဟာ
Previous Previous post: တူရကီက စခန်းတံခါး ဖွင့်ချလိုက်သော ဒုက္ခသည်များ ဥရောပနယ်စပ်သို့ ရောက်ရှိ။ နယ်ခြားကို ဇွတ်အတင်းဖြတ်ကျော်ရန်ကြိုးစားသဖြင့် ဂရိနယ်ခြားစောင့်ရဲတို့က မျက်ရည်ယိုဗုံးပစ်ပေါက် လူစုခွဲ
Next Next post: ဆီးရီးယားတပ်ဖွဲ့ဝင် ၂,၅၀၀ ကျော်ကို ချေမှုန်း၍ တင့်ကားနှင့် လက်နက်ကြီးများစွာတို့ကို ဖျက်ဆီးခဲ့ဟု တူရကီသမ္မတဆို။ အစသာရှိသေးပြီး တူရကီ၏ အင်အားအစစ်အမှန်ကို မပြရသေးဟု ပြော။ ရုရှားနှင့် အီရန်ကို တူရကီ သတိပေး